Tag: obodo | Martech Zone
Anọ m na-ezute na onye nwe ụlọ ahịa ma na-akọwa ụzọ dị ịtụnanya nke mgbasa ozi mgbasa ozi ọ bụghị nanị na achụmnta ego na ụlọ ọrụ m, kamakwa ndị ahịa anyị. O yikarịrị ka enweghị nchekwube ọ na - aga n'ihu na mgbasa ozi mmekọrịta yana ọ na - emetụta ọgbọ na - eduga ma ekwenyere m na ọ dị mkpa idozi ya. Imirikiti okwu ndị metụtara mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ọgbọ ọgbọ enweghị ihe ọ bụla metụtara nsonaazụ n'ezie,
N'afọ gara aga mgbe m gara Social Media Marketing World, enwere m mkparịta ụka dị ịtụnanya na Cheryl Viirand, onye guzobere Freedible. Cheryl akụkọ bụ ihe ọ bụla dị mkpirikpi nke ịtụnanya - ọ bụ onye ọka iwu na-arụ ọrụ na ụfọdụ nke technology ụlọ ọrụ kasị ukwuu mbụ ghọọ nri ọkwọrọikọ. Mgbanwe ahụ mere mgbe Cheryl tara ahụhụ na ọrịa na-enweghị isi na nwa ya. Na arụmụka bụ nri nri na uche nke na-emebi ndụ ya na ya
Izu a, a kpọrọ m ka m kwuo okwu na Smartups (Smarter Marketing + Startups) site n'aka onye guzobere ya, Tim Flint. Tim bụ onye nchịkwa nchịkọta mpaghara. Mkparịta ụka m bụ na njikarịcha na m kwuru okwu banyere ya kpọmkwem na nchịkọta… kamakwa otu njikarịcha ka emetụta azụmahịa m. Otu ebe m metụrụ aka bụ na eserese nke ịchọrọ nọmba iji dọta, mana leghaara ịchụ nọmba ahụ anya ma bulie ihe ndị ịchọrọ. Kpọmkwem
Ọ bụrụ na isi ihe na-akpali gị n'ịntanetị bụ ijikọ na ịkekọrịta ozi na ndị ọkachamara ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ma ọ bụ jikọọ na ndị ahịa na ndị na-ere ahịa, Facebook na-aghọ ngwa ngwa. N'etiti foto nkeonwe na mgbasa ozi, ọ na-eme mkpọtụ. LinkedIn ka bụ ebe ị ga - abụ mana Kaleio na - achọ ịkwalite nkwukọrịta ma jikọọ ndị ọkachamara ntakịrị. A na-edebe usoro ha, na-enweghị ihe ọ bụla, n'ime akwụkwọ akụkọ, ụlọ ọrụ ntinye ihe maka QnA, ihe omume